Posted on April 5, 2020 by Qeerroo
Ibsa ABO fi KFO
Bilisummaa Oromoo fi Koongirasiin Federaaliistii Oromoo dhimma weerara koronaavaayirasii fi dheereffamuu filannoo irratti ibsa waloo baasaniin Boordii Filannoo Biyyaalessaa qeeqan.
Boordichi sababa weerara koronaavaayirasiitiin gabatee yeroo filannoo qophaa’ee ture haquufi qophii filannoof taasisaa jiru adda kutuu beeksisee ture.
Dhiibbaa weerarri koronaavayirasii adeemsa filannoo irratti uumu ilaalchisee boordiin filannoo paartilee waliin mari’achuu kan eeru ibsi paartilee lamaanii, murtee kanarra gahuuf akki itti adeemame garuu sirrii miti jedhe.
Boordichi dhimmi kanarratti murtee kennuuf marsaa lammataaf paartilee siyaasaa waliin mari’achuuf beellama qabatee ture.
Haa ta’u malee marii marsaa lammataa hin goone, karaa keessaas murtee kana paartilee siyaasaa hin beeksifne jedha ibsi barreeffamaan paartileen lamaan gama marsaa hawaasaan baasan.
Paartileen lamaan dhimma kanarratti murtee xumuraa akka kennu boordichi Mana Maree Bakka Bu’oota Uummata gaafachuun isaas sirrii miti jedheera.
Manni maree amma jiru waggaa shan qofaaf aangoon kan kennameef ta’uu eeruun dhimmaa waggoota shanan filameef ala ta’erratti murteessuuf manni marichaa aangoo hin qabu jedheera.
Aangoon mana marichaa weerara dhukkubaanis ta’e maaliinuu waggaa shan caalaa akka dheereffamu heerri mootumma hin hayyamus jedha ibsi kun.
Kanaaf filannoo dheeressuus ta’e, murteen itti aanu maal ta’u qaba kan jedhurratti qaamni kamiyyuu murtee dhumaa dabarsuu irraa akka of qusatu gaafateera.
Dhimma kanarratti qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin marii fi falmiin godhamee waliigalteerra osoo hin gahiin murteen qaama tokko qofaan murtaa’u biyyattii balaaf kan saaxilu akka ta’es akeekkachiiseera.
Mootummaan filannoo bara 2012 dheeressuufis ta’e, 2013 booda mootummaa akkamiitu jiraata kan jedhu murteessuun waan mootummaa amma jiru qofaaf dhiifamu miti jedha.
Mootummaan maaltu itti aanee ta’uu akka qabu murteessuun dura qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin mari’atee irratti waliigaluun barbaachisaadha jedheera.
Ammatti xiyyeeffannaan hundi weerara vaayirasichaa ittisuu irratti ta’uu qaba kan jedhe ibsi kun, dhimmi filannoos irraanfatamuu hin qabu jedheera.
Gorsa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa hordofuun filannoof qophaa’uuf wanti barbaachisu hundi raawwatamuu qaba jedheera.
Motummaan amma aangoorra jiru waadaa dirree siyaasaa bal’isuu, nagaa buusuu fi diimokiraasii ijaaruuf seenee ture diigee ofii aangoorra turuuf tottolfataafi irree jabeeffataa jira kan jedhe ibsichi mootummaan siyaasas gara daldalaatti jijjiiree jira jechuun yakka.
Boordiin filannoos dhiibbaa mootummaan paartilee siyaasaa irraan geesisu hordofee dhaabsisuu hin dandeenye jechuun qeeqa.
Yeroo weeraraa kanatti qajeelfamoonni fi murteewwan mootummaan dabarsus kan dirree siyaasaa daranuu dhiphisu osoo hin taane, weerara vaayirasichaa to’achuuf qofaaf ooluu qaba jedheera.
Madda BBC Afaan Oromoo